China cnc ndarira zvikamu / zvendarira zvipenga zvikamu / tsvuku yendarira zvikamu fekitori uye vagadziri Weldo
Cnc ndarira zvikamu / zvendarira zvipenga zvikamu / tsvuku zvikamu zvemhangura
Cnc machining fekitori, yakakwira chaiyo machining cnc yendarira zvikamu, cnc zvikamu zvendarira, cnc tsvuku yendarira zvikamu
Cnc zvikamu zvendarira, zvikamu zvendarira, tsvuku dzendarira zvikamu
Brass: C11000, C10200, C12000, C26000, C36000, nezvimwe
Tin yendarira: QSn6, QSn4
Aluminium yendarira: QA19, QA110
Ndarira: QMn1.5, QMn5
Beryllium Bronze: Qsi1, Qsi3
Mhangura tsvuku: TU1, TU2, T2, T3
Electroless nickel, Electroless nhema, Matt chrome kuifukidza, yakasviba Teflon, upfu unhani,
Cnc machine, cnc kutendeuka, gringding, W / C, drlling ,, tapping…
3: machine (CNC machining centre, cnc lathe, chigayo, kutendeuka, kukuya, W / C, kuchera, kurova…)
Yedu satandard kurongedza: zvigadzirwa zvakaputirwa ne bubble, kana mu1 chidimbu / bhegi rePP, ipapo mubhokisi rematanda kana paroni katoni.
Yakanyanya kugamuchirwa Isiri-yakamira, yakajairwa, OEM, yakagadzirirwa machining zvikamu.
3: Zvekuungana: Tine nyanzvi yekuunganidza dhipatimendi, nekuti fekitori yedu inogadzirawo zvigadzirwa, zvinogona kupa kuungana uye kudzikisira sevhisi yako.
4: Yemhando: Isu tine ISO yakajairwa, uye nePND yekugadzira uye manejimendi sisitimu, chikamu chega chega chichava bvunzo uye kutarisa usati watumirwa.
8: Yebasa: Isu tinosvitsa zvikamu maererano nekudhirowa zvakanyanya, uye nekupa yakanaka inotevera.
Tinogona kugadzira ese marudzi esimbi zvinhu zvinoenderana mutengi chinodiwa. Uye, isu tinopawo imwechete-yekumira mhinduro kune vatengi vedu. Kana uine matambudziko, unogona kutibata, tichaedza nepatinogona napo kuti tikubatsire. Kana uine mazano anokosha, tichanyatsozvitora mukufunga.
Pashure: China Vatengesi Chigadzirwa CNC Machina Brass CNC Machining CNC Machining Chinese Machining Center
NaKitty anobva kuTanzania - 2017.07.28 15:46
Mune vatengesi vedu vanobatana, kambani iyi ine yakanakisa mhando uye mutengo unonzwisisika, ndivo sarudzo yedu yekutanga.
NaEdwina kubva kuSeattle - 2018.09.19 18:37
China Vatengesi Chigadzirwa CNC Machinery Brass CNC ...
Mutengo Unobudirira Tsika Yakagadzirwa CNC Lathe machine ...